प्रश्नः मेरो श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएको छ । अब मैले फेरी श्रम स्वीकृति लिनु पर्छ ?
उत्तरः तपाईँको श्रम सकिएको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिन पर्छ । अहिले सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ । तपाईँलाई कम्पनीले बोलाइरहेको छ र तपाईँ जाने देशले प्रवेशमा अनुमति दिन्छ भने पुनः श्रम स्वीकृति काठमाण्डौमा रहेको ताहाचल कार्यालयसँगै अन्य प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट पनि लिन सकिन्छ ।
प्रश्नः म अहिले नेपालमा छु । अब यूएई जानु पर्ने कसरी जान सकिन्छ होला ? मेरो भिसा अवधि बाकीँ छ । टिकट पाइन्छ त ?
उत्तरः अहिले भिसा र करारको अवधि हुनेलाई सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ । तपाईँले यस सम्बन्धमा थप जनाकारी लिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने नम्बर ११४१ अथवा १६ ६० ०१ ५०००५ मा फोन गरेर सोध्नहोस । तपार्इँले कलसन्टेरबाट विस्तृत जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ ।
राम मण्डल धानुक / साउदी अरेबिया
प्रश्नः मेरो अकामाको म्याद दुई बर्ष देखि सकिएको छ । कम्पनीले नयाँ बनाइदिदैन । म घर फर्किन चाहान्छु । म के गरु ?
उत्तरः अकामा सम्बन्धित समस्या साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासमा राख्नुहोस् । दूतावासले कि त कम्पनीसँग समन्वय गरेर अकामा बनाउन सहयोग गर्छ कि त स्वदेश फिर्तीका लागि समन्वय गर्छ । साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासको ०११४६१११०८ नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् । बिदाको दिन अथवा कार्यालय समयभन्दा अघि र पछि बेलुका ८ सम्म दूतावासको हटलाइनमा ०५५९३८९६०० नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
गोकर्ण बहादुर पुलामी / कतार
प्रश्नः हामी दसैंमा नेपाल फर्कने तयारीमा छ । अगस्तमा हाम्री कतार आइडी पनि सक्किन्छ । अब अक्टोबरमा आउन हामीले केके तयारी गर्नु पर्छ ?
उत्तरः सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्दासम्म स्वदेश फिर्तीका लागि चार्टर्ड उडाननै एक मात्र विकल्प हो । तर सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनका लागि पठाउने जहाजमामार्फत स्वदेश फर्कनका लागि दूतावासले तोकेको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यसका लागि दूतावासमा फारम भर्नुपर्छ । दूतावासले तपाईँले भर्नुभएको विवरणको आधारमा प्राथमिकतामा पर्नुभयो भने स्वदेश फर्कन पाउनुहुन्छ । तपाईँले अक्टोबरमा फर्कने भन्नुभएको छ । समय अझैं बाँकी छ । त्यो बेलासम्ममा कोरोनाले सृजना गरेक...
गोबिन्द घिमीरे / मलेसिया
प्रश्नः म कोठामा बसेको पनि आज तीन महिना भन्दा माथि भयो र मेरो भिसा पनि सकिएको छ । म घर फर्किन तयार बसेको थिए तर लकडाउन भयो अनि नेपाल आउन सकिन । दूतावासमा पनि नाम निस्किएको हो अनि मैले मेरो कम्पनीलाई जानकारी गराए । कम्पनीले टिकट धेरै महंगो भयो भन्यो । अनि मैले मेरो पासपोर्ट दिनु म घरबाट पैसा मगाएर जान्छु भनेको तर पासपोर्ट दिएन । यो कुरा मैले दूतावासलाई भने । राजदूतले हामीले केही गर्न सक्दैनाै भन्नुभयो । अब म नेपाल आउने कसरी हो ?
उत्तरः अहिलेको अवस्थामा परदेशमा परेका हरेक समस्याको समाधान गर्ने भनेको दूतावासमार्फत नै हो । किनभने गन्तव्य देशमा श्रमिकका समस्या समाधानका लागि रहेको आधिकारीक निकाय दूतावास नै हो । दूतावासले नै सक्दैनौं किन भनेको हो भनेर खुलाउनुभएको छैन । त्यसैले हाम्रो सुझाव, अहिले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत कल सेन्टरमार्फत पनि श्रमिकको गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले एक पटक कल सेन्टरमा फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्नुहोस् । मन्त्रालयको कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने नम्बर ११४१ अथवा ...
प्रश्नः दुबई फर्किनलाई के गर्नु पर्छ होला ?
उत्तरः दुबई फर्कनका लागि सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई कम्पनीले बोलाउनु पर्छ । त्यसका लागि कम्पनीसँग सल्लाह गर्ने र यूएई प्रवेशमा तपाईँलाई रोक हुँदैन भनेर कम्पनीले भनेमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने र ट्राभल एजेन्सीसँग समन्वय गरेर जान सकिन्छ । अहिले नेपालीलाई ल्याउनका लागि हिमालयन र नेपाल एअरलाइन्सले यूएईका लागि चार्टर्ड उडान भरिरहेका छन् । त्यसबाहेक फ्लाई दुबई र एअर अरेबीया पनि नेपाली लिएर नेपाल आइरहेका छन् । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि यी जहाजमा सम्पर्क गरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ ।
प्रश्नः अहिले सरकारले श्रम स्वीकृति रोकेको खबर सुने । इपिएसबाट कोरिया गएको र बिदामा फर्किएकाले जान पाउछन् कि पाउदैनन् । कोरियाको हकमा भने पहिले नै पाँच वर्षको श्रम स्वीकृति दिइएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा म जान पाउँछु कि पाउँदिन होला ?